Ha Sii Deyn Gabadha Leh 14-kaan Tilmaan | Aayaha
Aayaha editorDecember 16, 2018
Dadka ku jira xiriirrada waqtiga dheer qaata waxa ay ku tagi doonaan maalin ay is weyddiiyaan: tolow tani ma tahay qoftii aan rabay nolosheyda inta ka harsan in aan iyada la qaato? War gabadhani ma tahay mataanteyda? Saynisyahannadu waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay uga gungaari lahaayeen sida dadku isugu habboon yahay iyo tilmaamaha labada qof u horseedi kara xiriir farxad leh oo waara.
Waxa ay taqaan tanaasul
Hubaal waxaan u baahan nahay dad noo dhow oo ku qosla kaftankeenna. Daraasad la sameeyay 2006 ayaa waxa ay tilmaantay in haysashada lammaane kuu qaba in aad tahay shactiroole ay muhiim u tahay ragga in ka badan dumarka. Haddii aad haysato gabar aad isla qosli kartaan, ilaali oo si fiican u ogow.
Waa ay naxariis badan tahay
Waa ay is dejisaa kuna dejisaa marka aad dagaallantaan
By: Shaakir M. Cabdullaahi